धर्म जीवनको खोज हो – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ माघ ११, आईतवार ११:५६ गते
मनुष्यको जीवन जन्मसँगै उपलब्ध हुँदैन । जन्मपछि हामीलाई जीवन निर्माण गर्ने अवसर मिल्दछ । तर, जो मान्छेहरू जन्मनुलाई नै काफी सम्झन्छन्, उनीहरूको जीवन व्यर्थ हुन जान्छ ।
जुन जीवनलाई हामी वास्तविक जीवन मान्छौँ, त्यो बिस्तारै–बिस्तारै मर्नुबाहेक अरू केही होइन । त्यसलाई जीवन भन्न नै कठिन छ । जो जान्दछन्, उनीहरू त्यसलाई सुस्त मृत्यु नै भन्दछन् ।
तिमीलाई स्मरण हुनु पर्दछ, जन्मपछि हामी प्रत्येक दिन बिस्तारै मर्दैछौँ । मृत्यु अचानक आउँदैन । यो एउटा लामो विकास हो । जन्मेर जो सत्तरी वर्ष बाँच्यो, सत्तरी वर्षमा अचानक मृत्यु आउने हैन । मृत्यु त प्रतिदिन बढिरहेछ र सत्तरी वर्षमा पुगेर पूर्ण हुन्छ ।
हामी दिनहुँ मरिरहेछौँ । यहाँ हामी एक घन्टा बसेर चर्चा गर्दा हामी सबैको एक घन्टा उमेर कम हुनेछ । हामीले बाँचेको एकदिन हाम्रो उमेरबाट समाप्त हुनेछ । यो क्रम लामो भएकोले यो मर्नेक्रम हो भनेर हामी बुझ्दैनौँ । तर, वस्तुतः यो मर्नेक्रम नै हो । यदि यसैलाई हामीले जीवन सम्झियौँ भने भूल हुनेछ ।
यो जीवन हैन । यो सत्तरी वर्षको सुस्त मृत्यु हो ।
उसो भए जीवन के हो त ?
यदि यो जीवन हैन भने, जीवन अरू के हो त ?
जीवन बेग्लै कुरा हो । स्वयं भित्र जब यस्तो तत्वको दर्शन हुन्छ जसको मृत्यु हुँदैन, तब बुझ्नु कि हामीले जीवन जान्यौँ, जियौँ, चिन्यौँ । हामी जीवित भयौँ ।
सामान्यतः त हामी जीवित नै छैनौँ ।
बुद्धको समयमा लाखौँ मान्छेहरू उनको निकट गएर सत्यको खोजको लागि भिक्षु भएका थिए । एउटा बूढो भिक्षु एकै बिहान बुद्ध नजिक आए । बुद्धले उनलाई सोधे : तिम्रो उमेर कति हो ?
भिक्षुले भन्यो : केवल पाँच वर्ष ।
वरिपरिका भिक्षुहरू पनि दंग परे । ऊ त करिब पैँसट्ठी वर्षको बूढो थियो । बुद्ध पनि चकित हुनु भो । उहाँले सोध्नु भो केही भूल भो, तिमीले भन्नमा वा मैले सुन्नमा । वर्ष कति भो तिम्रो ?
उसले फरि भन्यो : केवल पाँच वर्ष ।
बुद्धले भने : कुन तरिकाले तिमी उमेरको गणना गर्दछौ ?
ती बृद्धाले भने : विगत पाँच वर्षदेखि नै मैले जीवन बुझेँ । त्यो भन्दा अघिको जीवन, आज म बुझ्दछु, त्यो जीवन नै थिएन ।
खानु, पिउनु, सुत्नु, काम गर्नु नै पर्याप्त हैन जीवित हुनको लागि । जीवन त अत्यन्त गहिरो अनुभूतिको नाम हो । कुनै अमृत, कुनै यस्तो तत्व, जसको मृत्यु हुँदैन, त्यो नजानेसम्म जीवन हुँदैन ।
अतः जसलाई हामी जीवन सम्झन्छौँ, यसलाई जीवन भन्न सकिन्न । यो त जीवनको प्रतीक्षा हो । सुस्तरी आएको मृत्युले एकदिन समाप्त गरिदिन्छ ।
केही फरक छैन, आज एउटा मान्छे मर्दछ, भोलि अर्को, पर्सि अर्को । हामी यहाँ जति जना छौँ, हामीलाई को कहिले मर्छ, दुई दिन, चार दिन, कोही वर्ष दिन, चार वर्ष, दस वर्षमा भन्ने थाहा यदि भयो भने हामीलाई थाहा हुनेछ कि हामी सबै मर्ने तयारीमा छौँ ।
तब के हामी सन्तुष्ट होऔँला या हामीभित्र त्यस्तो कुनै चीज, जसको मृत्यु हुँदैन, त्यो जान्ने प्यास नि जाग्ला ?
जो व्यक्ति यस किसिमको खोजमा लाग्दैन, त्यो व्यक्ति करिब–करिब अवसर व्यर्थमै गुमाउँदछ । उसको हातमा आएको समय व्यर्थ हुन जान्छ ।
गएको समय फर्केर आउँदैन । केही गरी पनि गएको समय फर्काएर ल्याउन सकिन्न ।
यो पनि ख्याल रहोस्, जसले त्यो जीवन, जसको मृत्यु हुँदैन, जानेन– उसको जीवनमा आनन्द र शान्ति पनि उपलब्ध हुन सक्दैन । …यसै कारण मैले तिमीलाई भनेँ कि यो जीवनलाई नै जीवन नसम्झनू, यो मृत्युको प्रतीक्षा मात्र हो ।
बसको लाइनमा उभिएझैँ हो । कोही अगाडि छन्, कोही पछाडी, कोही अझै पछि छन्, तर सबै लाइनमा उभिएका छन्, एकैछिनमा बस आउँछ, एक–एक गरी सबैलाई लिएर जान्छ ।
ठीक यसरी नै हामी सबै जना मृत्युको लाइनमा उभिएका छौँ । जो अगाडि छ ऊ पहिला जान्छ, त्यो लाइनबाट एक–एक गरी सबैलाई मृत्युले लिएर जान्छ । हामी सबै प्रतीक्षारत छौँ ।
यसले के फरक पर्छ र ? मृत्यु सात दिनमा आउँछ कि सत्तरी वर्षमा, आउन त आउने नै छ ।
के हामी कुनै बाटो खोज्न सकौँला कि मृत्युबाट बचौँ ? यस्तो कुनै बाटो होला ? यो मृत्युको भयबाट मुक्त हुने कुनै मार्ग हुन सक्ला ?
धर्म यही कुराको खोज हो ।
धर्मको सम्बन्ध इसाई, मुसलमान, हिन्दू, जैनसँग छैन ।
हामी आफूमा मर्ने तत्व– हाम्रो शरीरलाई त जान्दछौँ । तर, के शरीर नै सबै कुरा हो ? या हामीभित्र आत्मा जस्तो केही कुरा नि छ, जुन मर्दैन ।
जबसम्म हामी आफैँ आफूभित्र खोज्दैनौँ तबसम्म अरूले भनेरमात्र हुँदैन । धर्म यही कुराको खोज हो ।